travelparis Archives | एक ट्रेन सेव
फ्रान्स आकर्षण हजारौं घर छ. यस प्रतिष्ठित एफिल टावर बाट पेरिस नाइस को pebbled समुद्र तट, गर्न अनन्त कुराको देश. तर के तपाईं एक layover मा गएर भने, or you have already checked out of your hotel…
युरोप उत्पादन र कफी को एक unfathomable रकम खपत, यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो कफी पसल र क्याफे छ. यो एक कफी प्रेमीहरूको Mecca र खुलस्त छ, एक महान सम्झौता बस भन्दा बढी. क्याफे संस्कृतिको संसारको एउटा विन्डो छ. हामी बाहिर खोज्न…
प्रत्यक्ष संगीत संग बार युरोप मा सबैतिर पप अप, पेय र गीतहरू मुक्त प्रवाह जहाँ एक जीवंत ठाउँमा समय मार्न तरिका भेटी. तपाईं आफ्नो रेल यात्राको समयमा शहर मा केही रमाइलो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी केही सुझावहरू भयो. यहाँ छन्…
सडक कला भन्ने हाम्रो शहर थप सुन्दर बनाउँछ कलात्मक अभिव्यक्ति को आधुनिक रुप हो. राम्रो सडक mural पनि एक सामाजिक महत्त्वपूर्ण विषय सोच्न वा शास्त्रीय मालिकको को काम सम्झाउने प्रेरित सक्छ. Cities of Europe are full of…
युरोप मा ऐतिहासिक होटल एक दुर्लभ दृष्टि छैन, विशेष गरी एक धनी इतिहास संग ठूलो शहर मा. पेरिस, लन्डन, रोम, म्यूनिख, भियना - यी शहर को सबै प्रस्ताव राम्रो ठाउँमा छ. Tourists who crave some traditional luxury will have no difficulties findingaplace…
पेरिस गर्न हिउँदमा रेल यात्रा धेरै भत्तों आउँछ. सबै भन्दा पहिले, यो यात्रा गर्न सबैभन्दा सहज बाटो हो. को सिट विशाल छन्, तपाईं एक विमान मा हुनेछ तपाईं भन्दा बढी legroom अनुमति. Going by train is also one of the safest ways to…
पेरिस र नाईस ट्रेनहरू द्रुत र दक्ष ट्रेन प्रणालीले जोडेका छन् त्यसैले दुई प्रान्तहरूमा एकैचोटि भ्रमण गर्नु कहिले सजिलो भएको छैन. यी दुई contrasting क्षेत्रहरु प्रत्येक वर्ष पर्यटकहरू हजारौं आकर्षित. Nice lies at the heart of the stunning French Riviera in…
सबै भन्दा साधारण र लन्डन र पेरिस बीच यात्रा गर्न सजिलो तरिका को एक Eurostar मार्फत छ, उच्च गतिको रेल दुई क्यापिटल जडान. जबकि त्यहाँ हप बनाउन देख यात्री लागि विकल्प को अधिकता, युरोस्टार एउटामा रहेको छ…